Home Editor-Picks नेपालको खोप अभियानमा एनआरएनएले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालको खोप अभियानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । उसले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप नेपाल भित्र्याउन पहल सुरुसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन साउथ एसियाका वरिष्ट खोप विज्ञ तथा स्वास्थ्य अधिकृत डा. सुधीर खनालसँग नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप लैजान सकिने सम्भवना र चुनौतिको बारेमा छलफल गरेको थियो ।
भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघले विज्ञहरुको रायका आधारमा खोपका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप किन्न संघ ईच्छुक रहेको उल्लेख गरे ।
छलफलमा एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सन्जीव सापकोटाले खोप लैजान नेपालमा प्रयाप्त तयारी भएको छैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देशमा खोप भित्राउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सकिने बताए । डा. सुधीर खनालले नेपालले ल्याउने खोप डब्लुएचओबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालका लागि बेलायत, जर्मनी लगायतका मुलुकले उत्पादन गरेका खोप नेपाल ल्याउन सकिनेबारे छलफल र तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
भारतले बनाएको खोप सहजता र सुलभता एवं अन्यको तुलनामा सस्तो भएका कारणले नेपालको लागि उपयुक्त हुने उनले बताए । नेपालमा एउटै उत्पादनकर्ताको खोप भित्र्याउन नेपाल सरकारलाई उनको सुझाव थियो । नेपालको आवश्यकता हेरेर मात्र खोप भित्राउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। उनले नेपालको ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिनको लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरे ।
भारत, चीन र रसियाबाट नेपालको लागि खोप ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । भारत सरकारलाई नेपाललाई आवश्यक मात्रामा पूरा हुने गरी खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्न सकिने उनले बताए । डा. खनालले नेपालमा खोप खरिद गर्नको लागि आवश्यक ऐन तथा कानूनहरु बाधक रहेको समेत बताए ।
१०० मध्ये ९७ जना संक्रमणमुक्त
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - January 10, 2021
काठमाडौं । प्रत्येक सयमध्ये ९७ जना संक्रमणमुक्त भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुलमध्ये ९७ दशमलव ५१ प्रतिशत संक्रमणमुक्त भएका छन्...
Not-to-be-missed एजेन्सी - January 10, 2021
प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सभामुखसँग जसपाको माग
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्षस्थ नेताहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग आज अपराह्न भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा...
रंगशालाको मर्मत सुरु
राजधानी समाचारदाता - April 10, 2020
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला मैदानको मर्मत कार्य सुरु गरेको छ । विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)...
संसद विघटन बदर गर्न माग गर्दै नेकपा सांसदद्धारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता
Breaking News राजधानी समाचारदाता - December 22, 2020
काठमाडौं । नेकपाका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ,...
प्रमुख नवीन शिशिर - August 2, 2020
भर्खरै एएनआई - April 28, 2020
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - January 10, 2021
सिमकाेट । निःशुल्करूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बैंक खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नमूना दस्तखत कार्डको फोटोकपी गरेकाे सेवाग्राहीले ४० रूपैया तिर्ने गरेका छन् । जिल्लाको...
प्रतितोला २३ सयले घट्यो सुनको मूल्य
सुरेम देशार - January 9, 2021